အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: တပ်မတော်သည် အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်
တပ်မတော်သည် အမျိုးသားရေးကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက် ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် အကြီးကြီးတွေ ထောင်ထားတဲ့ခေတ်တုန်းက ....။
(၁) ဘင်္ဂလီတွေကို တောင်ကျော်ကုန်ကူးခဲ့သူတွေက ............... ဘယ်သူတွေပါလဲ....။
(သွင်းခဲ့သူတွေက လက်ရှိ ရန်ကုန်မှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ) ဘယ်သူတွေပါလဲ....။
(၂) ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရခိုင်က ဘူးသီးတောင်-မောင်တော အပါအ၀င် .
မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ ကြံ့ဖွတ်မဲရဖို့အတွက် ...
ဘင်္ဂလီ ငါးသိန်းကို white card (ယာယီနိုင်ငံသားကတ်) ပေးခဲ့တာ ..................... ဘယ်သူတွေပါလဲ..။.
ဒီလောက် သမိုင်းမှာ အမည်းစက် အဖြစ်ဆုံးသော ကိစ္စကြီးတွေကို ....
အခု အမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး post တင်နေတဲ့ page များက ဘာ့ကြောင့် မဖော်ထုတ် .. မရေးသားကြတာလဲ .................. ဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ရင်
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:42 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook